Hono hoy aho ry olona iraika iny,
Inona indray ary ity fihetsikao ?
Ohatra ny taloha ny ankehitriny ;
Tsy miova mihitsy ny tonta no vao.
Hono hoy aho ry olona iraika iny ;
Misy ny fotoana, mety mifamaly.
Mahavariana fa ny niseho fahiny,
No indro miverina ohatra ny omaly.
Voahevitra tsara ve ny teny avoaka ?
Madio ve ny saina, sa tsy misy tsiny ?
Satria avy eo dia iny lasa mitsoaka.
Mora mitrifana tsy hita hoe ahoana.
Natao hoe niova hay namaky siny ;
Maherihery fiteny sy minaonaona.
Sarotra resahana fa mahatoky tena.
Ny anio tsy ohatra ny niseho fahiny ;
Raha midaboka eo dia tena ho lena.
Miserana anie ny fiainana an-tany !
Satria ny rehetra anie dia mpivahiny ;
Veloma eo izay tsy mahalala izany !
16 Marsa 2019
Sokajy : fananarana, fiainana, Fitiavana, Tontolo iainana